အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: တီချမ်း…၀ါသနာအဖြေရှာ............
Posted by တီချမ်း at 11:56 AM
ဖိုးစိန် May 15, 2009 at 12:24 PM
သူ့ ကို သူ နာမည်ကျော်များထင်နေလားတော့မသိ
မိုးခါး May 15, 2009 at 12:27 PM
ပြောသားပဲ .. :D
ဟေ့ဟေ့ တော်တော်လေး နီစပ်ပါတယ်။ ပြောသာပဲ တူအရီး ပါဆိုမှ။
နန်းညီ May 15, 2009 at 1:41 PM
Mae May 15, 2009 at 3:17 PM
"Full, ဗုံး၃ လုံးကား"
အဲ့ဒါဘာတွေလဲ ဒေါ်ချမ်း? မကြားဖူးလို့
ဲယောင်္ကျားပဲ ကြိုက်လဲ ယောင်္ကျားယူပြီး ကလေးမွေးစားပါလား? ချမ်းက အမေနေရာယူပေါ့
khin oo may May 15, 2009 at 3:31 PM
သီဟသစ် May 15, 2009 at 10:36 PM
sweetpeony May 15, 2009 at 11:06 PM
တီက နာရီကြီးနဲ့ ပြထားတော့ ဒီက ဦးနှောက်ကို အလုပ်အရမ်းပေးပြီး အိုင်ကျူကို မြှင့်လိုက်တာပေါ့လို့ 